Duulimaadkii ugu horreeyay ee rakaab ajnabi ah oo ka yimaadda Islamabad ayaa ku degay garoonka diyaaradaha ee Kabul
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Afgaanistaan » Duulimaadkii ugu horreeyay ee rakaab ajnabi ah oo ka yimaadda Islamabad ayaa ku degay garoonka diyaaradaha ee Kabul
Wararka Afgaanistaan • Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • News • Pakistan War Deg Deg Ah • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Af -hayeenka Diyaaradaha Caalamiga ah ee Pakistan ayaa sheegay in dhammaadka usbuuca ay shirkaddu doonayso inay dib u bilowdo adeegyadii ganacsi ee caadiga ahaa, laakiin waxay ahayd goor dhow in la sheego inta jeer ee duulimaadyada u dhexeeya labada caasimadood ay shaqeyn doonaan.
Diyaaradda Caalamiga ah ee Pakistan ayaa u duushay Kabul kana timaadda Islamabad.
Ma cadda in ay ahayd duulimaad qorshaysan ama mid kiro ah.
Ku dhawaad ​​70 qof ayaa ka tagay Kabul kuna sii jeeday caasimadda Pakistan iyagoo saarnaa diyaaradda PIA.
Diyaarad ay leedahay Pakistan International Airlines oo ka duushay Islamabad ayaa noqotay duulimaadkii ugu horreeyay ee rakaab ajnabi ah oo soo caga -dhigta garoonka diyaaradaha ee Kabul tan iyo markii ay Taliban qabsadeen Afgaanistaan.
Diyaaradda rakaabka ee PIA oo siday rakaab kooban ayaa maanta ku soo degtay garoonka diyaaradaha ee Kabul, iyadoo “ku dhawaad ​​10 qof…
Illaa iyo hadda lama caddeyn in Diyaaradda Pakistan International Airlines duulimaadka waxaa lagu tilmaamay duulimaad ganacsi oo jadwal u ah ama heshiis ganacsi oo gaar ah.
Afhayeen u hadlay PIA ayaa sheegay in dhammaadka wiigga uu diyaaraddu diyaar u tahay oo ay diyaar u tahay inay dib u bilowdo adeegyadii ganacsi ee caadiga ahaa, laakiin waxay ahayd goor dhow in la sheego inta jeer ee duulimaadyada u dhexeeya Islamabad iyo Kabul ay shaqeyn doonaan.
Madaarka Kabul ayaa si xun u burburtay intii ay socdeen daadgureynta in ka badan 120,000 oo qof taas oo ku dhammaatay bixitaankii ciidamada Mareykanka 30 -kii Ogosto.
Saldhigyada rakaabka, buundooyinka hawada iyo kaabayaasha farsamada ayaa si xun u burburay maalmo kadib markii Taalibaan ay soo gashay Kabul 15kii Ogosto, markaas oo kumanaan qof ay weerareen garoonka iyagoo rajaynaya inay magaalada ka qaxaan.
Daalibaan waxay u tartamaysay sidii ay mar kale u shaqayn lahayd gegida dayuuradaha iyada oo kaalmo farsamo ka helaysa Qadar, Turkiga iyo dalal kale.
Dib u bilaabashada duulimaadyada ganacsiga ayaa tijaabo muhiim ah u noqon doonta kooxda argagaxisada ah, oo marar badan ballan qaaday inay u oggolaan doonaan dadka reer Afghanistan ee haysta dukumentiyada saxda ah inay si xor ah dalka uga baxaan.
Diyaaradda Qatar Airways ayaa dhowr duulimaad oo kiro ah ka shaqaysay Kabul toddobaadkii hore, iyada oo siday inta badan ajaanib iyo Afgaanistaan ​​kuwaas oo seegay daadgureynta.
Ariana Afghan Airlines ayaa dib u bilowday adeegyadeedii gudaha 3 -dii September.
Diyaaradda PIA ayaa duulimaad dib ugu laabatay Islamabad waxyar kadib markii ay ka degtay Kabul Isniintii.
Qiyaastii 70 qof ayaa ku jiray duulimaadkii ku socday caasimadda Pakistan, oo u badnaa Afgaanistaan ​​kuwaas oo qaraabo la ahaa shaqaalaha hay'adaha caalamiga ah, sida ay sheegeen shaqaalaha garoonka diyaaradaha.
Dalxiiska Meksiko oo ay ku waxyeeloobay Socdaal aan muhiim ahayn ee Mareykanka ...
Tareen cusub oo jaban oo ka yimid London kuna socda Edinburgh
Ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhimatay masiibo ka dhacday waqooyi bari Mareykanka ...
EasyJet waxay ka duushay Gatwick Airport iyadoo joogtaysa ...
Shirkadda South African Airways ayaa ku dhawaaqday in ay yeelaneyso Ku -meelgaar sare oo cusub
50,000 Shaqaalaha Dalxiiska Jamaica Waxay Dib Ugu Laabanayaan Shaqada Ugu Dambeyn ...
Diyaaradda Super Hornet Fighter oo ku burburtay Saxaraha California
Air Belgium waxay heshay diyaaraddeedii ugu horreysay ee Airbus A330neo
Afar dalxiisayaal Ruush ah ayaa la dilay, 16 kalena waa la dhaawacay Turkiga ...
Baaritaanka cusub ee COVID-19 antibody-ka hal ayaa u baahan 6dii jeerba mar ...
Ka tagista Daabacaadda Cagaaran inta lagu jiro Fasaxa Seychelles
Madasha Dalxiiska Caalamka oo Maqashay Baahida Muuqashada ...
Tijaabada caafimaadka ee nooca kiniinka ee tallaalka COVID-19 ...
Hungary waxay u ogolaaneysaa gelitaanka ruushka si buuxda looga talaalay ...
Wasiirka Dalxiiska Jamaica oo kulan la qaatay Safiirka cusub ee Canada ...
Waxaa lagu abaalmariyay inuu noqdo Geesi Dalxiiskii ugu horreeyay ee ka socda Azerbaijan
Xeerarka Xudduudda Cusub ee Soo -booqdeyaasha Kanada: 10 Gobol oo Mareykanka ah ...
Dalxiiska Caribbean ee 2021: Gut Feed